Unicorn Cake Tutorial + Yemahara Ziso Rakadhindwa - Vhidhiyo Yemahara
Unicorn Keke Kudzidzisa
Keke yeunicorn keke ine muraraungu vhudzi, runyanga rwegoridhe, uye nyore kupenya maziso
Muraraungu uri nyore Unicorn keke ndoooooakanaka! Iri keke yeunicorn muraraungu mukati nekunze! Ini ndinoda kunaka kwakaita muraraungu keke batter yakabuda uchishandisa yangu chena velvet buttermilk keke recipe . Iyo murarabungu buttercream mane yakashongedzwa nema sprinkles uye runako rwegoridhe unicorn runyanga zvinongoita ichi chakatemerwa muraraungu unicorn keke evah!
Ini ndakatanga kugadzira iyi unicorn keke kirasi yemusikana mwanasikana uye bestie wake. Ini ndakafanogadzira makeke uye ndakaatonhora nechando saka zvese zvavaifanira kuita kuashongedza. Ini ndakanyatso kufadzwa nemabatiro avakaita vasikana nekupomba kwebvudzi! Chinhu chavakarwira nacho zvakanyanya kuburitsa fondant eyelashes lol.
Rainbow keke recipe
Ok nhanho yekutanga, gadzira makeke. Ndakakwapura batch rangu chena velvet keke yeresipi iyi nekuti inonaka AMAZING asi zvakare iri chena chena keke saka zvinotora iwo ruvara chaizvo. Dzimwe sarudzo dzakanaka ndidzo chena keke recipe uye WASC keke . Vanilla keke inoshandisa mazai emazai saka iyo batter inowanzoita kuti iro rebhuruu riite girini.
Ini ndinoda kuti keke iyi yemurarabungu yakabuda sei! Zvinonakidza kwazvo kugadzira uye pembedzo huru yekuwana mavara!
Gurai bhatani renyu rekeke mumidziyo mina.
Ini ndaishandisa Americolor magetsi chikafu chikafu nekuti ini ndinoda yavo yakajeka neon mavara. Ini ndaishandisa pink pink, yemagetsi bhuruu, yemagetsi yeyero, uye yemagetsi green.
Wedzera 1-2 tsp yekupenda chikafu kune yega ndiro uye sanganisa.
Isa bhatiki rako rekeke mumatanhatu matanhatu-makeke mapani akagadzirwa nawo keke goop (yakagadzirirwa pamba pan)
Ini ndakachekesa mavara angu neiyi odhi, bhuruu, pingi, yero, girini (dzokorora).
Bika muchoto pa335ºF kwemaminetsi makumi matatu kusvika pamakumi matatu kusvika gonhi rinobuda rakachena.
Pakarepo tapota keke pakaunda kuti uburitse homwe dzemhepo uye udzikise kudzikira.
Rega kupora maminetsi gumi usati wabvisa mupani nekumisikidza padheki rekeke. Kusunungura 1 awa usati watonhora kana kuputira mupurasitiki nekuputika husiku.
Maitiro ekugadzira iyo unicorn keke
Mushure mekunge makeke angu atonhorwa, ini ndinoaisa uye ndoazadza neyangu akareruka buttercream recipe uye kutsvagisa iyo buttercream nebhenji rinokwesha. Kana iwe uchida rumwe ruzivo rwekuti ungaita sei keke, tarisa yangu yemahara dzidziso pane izvo zvekutanga zve kugadzira keke rako rekutanga .
maitiro ekugadzira bhokisi keke kusanganisa nyoro
Ini handinetseke zvakanyanya nezvekuwana mativi akanyatsotsetseka asi kana iwe ukatevera yekupedzisira nhanho mune yangu nyore buttercream recipe , unenge uine buttercream iyo yakanaka kwazvo bubble yemahara.
Maitiro ekugadzira iyo nyati keke maziso
Ndinoziva makeke mazhinji eunicorn ane maziso akavharwa uye akaita sepombi zvakanyanya asi ini ndaida kuita chimwe chinhu chakasiyana. Ini ndiri mudhara mukuru wepamoyo wangu mudiki uye anime saka ndaida kuti nyati yangu ive nemaziso anobuda pachena.
Ini ndakagadzira aya eunicorn maziso aunogona kurodha pasi uye kupurinda uchishandisa yako inodyiwa inki printa. Ini ndinoda yangu Canon MG6821 purinda , Photofrost anodyiwa emashizha emifananidzo uye inki inodyiwa. Izvo hazvina kundivhara kamwechete uye ini handimbofi ndakadhinda.
Matipi ekudhinda mifananidzo inodyiwa
Ita shuwa kuti ako ekudhinda marongero akaiswa kune BEST QUALITY PHOTO uye bepa rako rakaiswa papikicha bepa. Zvikasadaro, iwe unogona kuwana kutenderera uye mitsara mupepa rako.
Shandisa nyowani inodyiwa yemapepa yemapepa inochinjika kana inogona kuve yakaoma kutema.
Cheka mifananidzo yako uchishandisa cuticle chigero kana x-acto blade.
Kamwe kana maziso ako akadhindwa uye akachekwa iwe unogona kungoaisa pakeke. Ini ndakaisa yangu ndakananga kuzasi kwekeke kuti vataridzike vakanaka uye katuni. Kana iwe ukavaisa kumusoro, hauzove nenzvimbo yebvudzi. Iwe unogona kuwana yemahara nyati maziso anodyiwa mufananidzo nekupinda yako email mukati pop-kumusoro pane ino peji. Mufananidzo wacho uchaendeswa kubhokisi rako rekunyora.
Maitiro ekugadzira iyo unicorn keke runyanga
Ino yave nguva yekuisa panyanga nyati! Ndinoisa keke rangu repopu pamusoro pemusoro uye ndoburitsa imwe fondant kuita nyoka. Mumwe mugumo wakakora kupfuura mumwe.
Putira nyoka inonakidza uchitenderedza keke pop stick kuitira kuti ive yakanaka uye inonhuwa. Shandisa maoko ako kuzadza chero maburi kana maburi mune fondant. Kana iwe usingafarire maitirwo ayo, ingoidhonza woedza zvekare. Usatore moyo kana zvikatora iwe kuyedza kushoma.
Kana iwe usiri kuda kupokana ne fondant, unogona kushandisa shamwari yangu zvinotyisa Unicorn runyanga muforoma . Chizadza nechokoreti kana isomalt uye iwe uchave uine yakakwana nyati nyowani yekeke rako!
Penda nyanga yako yeunicorn nemusanganiswa weTMP goridhe rakakura rakasanganiswa nemadonhwe mashoma ezviyo doro (ini ndaishandisa Everclear) kugadzira pendi gobvu. TMP haina-chepfu. Zvimwe zvigadzirwa zvakanaka zvegoridhe zviri chinodyiwa mugadziri wekushongedza pendi esimbi .
Maipi kupomba bvudzi pane keke yeunicorn
Iye zvino chikamu chinonakidza! Kugadzira iyo unicorn mane! Ini ndakapenda nezve 1 mukombe weiri nyore buttercream kune yega yega ruvara (yemagetsi bhuruu, girini, yero uye pingi) Paradzira iyo buttercream pachidimbu chepurasitiki (ona vhidhiyo) kugadzira buttercream bullet.
Vasikana mukirasi yangu vaida kusarudza kuti ndeapi marongero eruvara uye matipi ekupomba ivo yavaizoshandisa kupomba iwo unicorn bvudzi!
Isa bara mukati mehombodo yepombi ine 1M nyeredzi yekupomba nyeredzi uye wotanga kugadzira mamwe maRoseti! Iwe haugone kukanganisa izvi uye ndizvo zvinopa keke yeunicorn hunhu.
Ini ndakateedzera kumusoro kweiyo rosettes ine diki nyeredzi tip (isina chokwadi saizi) uye imwe yero buttercream. Ipapo ini ndakawedzera pane mamwe mafafita kubva Sweetapolita (affiliate link) kubwinya kusanganisa kwemamwe mashiripiti!
Maitiro ekugadzira nzeve dzeako unicorn keke
Ini ndaiwanzofarira kugadzira nzeve dzangu dzeunicorn. Ingo rongedza zvimwe fondant mubhora wobva wanyatso gadzika zvishoma kuti uite chimiro chemashizha. Cheka nehafu kuita nzeve mbiri (ona vhidhiyo). Ini ndakaburitsa pakati penzeve tad ndikazunza guruva mukati neimwe guruva peturu peturu.
Iwe unogona kuisa nzeve chaidzo pane iyo buttercream uye ivo vanonamira kana iwe unogona kuisa chidimbu chepaghetti yakaomeswa uye woishandisa iyo kunamatira mukeke. Usashandise mazino, ane njodzi uye anogona kubaya mumwe munhu muromo.
Kupedza iyo keke yeunicorn
Chinhu chekupedzisira chandakaita pombi diki chena muganhu wakakomberedza pasi pekeke ne # 4 kutenderera pombi yekurira uye imwe chena buttercream. Iwe haufanire kuita firiji iri keke kana uchiridya zuva rimwe chetero. Kana iwe ukaita firiji, ita shuwa kuti unounza nayo kutembiricha yemukamuri maawa mashoma usati waidya kuitira kuti bota riwane nguva yekunyorova uye kuva rinonaka zvakare.
Ive neshuwa yekutarisa yangu vhidhiyo dzidziso nezve maitiro ekugadzira iyo unicorn keke pazasi!
Unicorn Keke Recipe
Nzira yekugadzira muraraungu chena velvet keke neiri nyore buttercream! Iyi kamukira inogadzira matatu 6'x2 'akareba makeke akaturikidzana. Bika pa335F kwemaminetsi makumi matatu kusvika pamakumi matatu kusvika gonhi rinobuda zvakachena. Gadzirira Nguva:10 mins Nguva Yakabika:30 mins Nguva Yese:40 mins Makorori:823kcal
▢12 oz upfu hwekeke
▢12 oz shuga yakawanda
▢1 tsp munyu
▢1 Tbsp poda yekubheka
▢1/2 tsp soda yekubikisa
▢5 oz mazai machena tembiricha yekamuri
▢4 oz mafuta ekubikisa
▢10 oz buttermilk tembiricha yekamuri kana kudziya zvishoma
▢6 oz ruomba isina sarufa uye yakapfava
▢piri tsp Vanilla
▢8 oz pasteurized zai vachena
▢32 oz unsalted ruomba yakanyoroveswa kukamuri temp (isina kunyungudika)
▢32 oz hupfu hwehuga kusefa
▢1 Tbsp vanilla yakabudiswa
Chena Velvet Keke Mirayiridzo
ONA: ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA KUTI tembiricha yemukamuri yese yakanyorwa pamusoro apa tembiricha yemukati uye kuyerwa nehuremu kuitira kuti izvo zvinosanganisa zvisanganise uye zvibatanidze nenzira kwayo Ovuni inopisa kusvika ku335º F / 168º C - 350º F / 177º C. Ini ndinowanzo shandisa marongero epasi kudzivirira makeke angu kubva mukusviba zvakanyanya kunze mukati usati wapedza kubheka.
Gadzirira matatu 6'x2 'mapani ekeke nekeke goop kana inodiwa pan piritsi. Zadza mapani ako nezve 3/4 yenzira izere nebatter. Iwe unogona kunge uine batter diki zvasara. Iwe unogona kuzviita mumakeke!
Dhonza pamwe chete hupfu, shuga, poda yekubheka, kubika pasoda uye munyu mundiro yemusanganisi wemira pamwe neshongedzo yepaddle. Sanganisa masekondi gumi kuti ubatanidze.
Tevere, sanganisa 1/2 mukombe wemukaka nemafuta pamwe chete woisa parutivi.
Sungai mukaka wakasara, mazai machena uye vanilla pamwe chete, whisk kuputsa mazai uye kuisa parutivi.
Wedzera bhotela rako rakapfaviswa kune zvakaoma zvinoshandiswa uye sanganisa pazasi kusvikira musanganiswa wakaita sejecha rakakora (anenge masekondi makumi matatu). Wedzera mumusanganiswa wemukaka / wemafuta uye rega musanganise kusvikira zvigadzirwa zvakaomeswa zvinyorovesa wozobhururuka kusvika kumedhi (kumisikidza 4 pane yangu kitchenaid) uye rega kusanganisa kwemaminetsi maviri kuti uvake chimiro chekeke. Ukasarega keke rako richisanganiswa padanho iri keke rako rinogona kupunzika.
Gurai batter keke mumidziyo mina. Wedzera 1-2 tsp yechikafu chekudya kune yega ndiro uye fambisa kusvika zvangosanganiswa.
Govanisa batter muzvitatu zvitanhatu zvemakeke akagadzirwa nekeke goop kana imwe yakasarudzika pani kuburitswa. Bika maminetsi makumi matatu kusvika makumi matatu kusvika gupuro rakaiswa mukati rinobuda zvakachena asi keke harisati ratanga kudzikira kubva kumativi epani.
Rega makeke atonhorere kwemaminitsi gumi mukati megango usati waburitsa iwo. Flip pane inotonhorera rack uye rega itonhore zvizere. Ini ndinotonhora makeke angu mufiriji kweawa rimwe usati washandisa kana iwe unogona kuputira mupurasitiki yekuputira uye kutonhora mufiriji husiku hwese.
Nyore Buttercream Frosting Mirayiridzo
Isa mazai machena uye hupfu hwakatsetseka mune chimisi chisanganisi ndiro. Isai whisk uye sanganisai zvigadzirwa pazasi uye wozorova kumusoro kwemaminetsi mashanu
Wedzera muhotela yako mumachunks uye chikwapu nechisungo che whisk kuti ubatanidze. Inotaridzika kunge yakakombama pakutanga. Izvi zvakajairika. Ichataridzika zvakare kunge tsvuku. Ramba uchirova.
Rega chikwapuro chakakwirira kwemaminetsi gumi nemasere kusvika chena kwazvo, chakajeka uye chinopenya.
Chinja padanda rekubatanidza uye sanganisa pazasi kwemaminetsi gumi nemashanu kusvika gumi nemashanu kuti uite buttercream yakanyatsotsetseka uye kubvisa matema emhepo. Izvi hazvidiwe asi kana iwe uchida chaizvo inotonhorera chando, haudi kuisvetuka. Iwe unogona ikozvino kupenda yako buttercream sezvazvinodiwa.
Makorori:823kcal(41%)|Carbohydrate:131g(44%)|Mapuroteni:16g(32%)|Mafuta:26g(40%)|Mafuta Akaguta:18g(90%)|Cholesterol:43mg(14%)|Sodium:428mg(18%)|Potassium:365mg(10%)|Fiber:3g(12%)|Shuga:53g(59%)|Vhitamini A:545IU(gumi neimwe%)|Calcium:175mg(18%)|Iron:3.9mg(22%)
kugeza sei mahabhurosi nevhiniga
mashandisiro ekushandisa dhijitari sikero
nyore french macaron recipe isina hupfu hwealmond
maitiro ekugadzira bhokisi rekeke sekeke rebheka